high precision hefei optoelectronic technology co.rice color sorter machine,irayisi umatshini umbala Sorter,
Ixabiso-olusebenzayo amandla eliphezulu irayisi sorting.The entsha Umbala Sorter kulukhetho kuqala abaqhubekekisi irayisi efuna ubunini, isiqinisekiso kunye usebenzo woqondo ubeko lemveli kunye nobuchwepheshe ngexabiso elifikelelekayo.
umatshini irayisi umbala Sorter ulungele abaqhubekekisi irayisi ngubani iintlobo uhlobo ezahlukeneyo zerayisi kunye nokulungiswa ezahlukeneyo stages.The lokhetho uluhlu ilungele abaqhubekekisi abo bafuna liphezulu kumgangatho irayisi, umnikelo ochanileyo lokhetho ukuze kwandiswe isivuno kunye neengeniso ukwanda.
Ekrwada irayisi lwesikhombiso:
Ku nga ngempumelelo ususa iziphene zombini ngazo nento mngeni kunye nezinto zangaphandle; discolouredgrains, iinkozo emhlophe, sizizifanya bran, izinti, amatye kunye iimbewu amazwe okungafunekiyo, eshiya uhlobo ogqityiweyo, ecocekileyo, kwaye ikhuselekile.
White irayisi lwesikhombiso:
sinako usombulule iinkozo ezibomvu, mthubi, luhlaza, irayisi emhlophe, irayisi ezinombala alincedi, iinkozo blackspotted kunye itshatshazi ngaphantsi kwe 0.25mm.
Parboiled irayisi lwesikhombiso
Sinako usombulule abamnyama watshisa iinkozo, ezinombala, spotted.And abamnyama nabanye iinkozo ayilunganga.
inkqubo umgangatho nokusebenza Sorter ngayo linokuchazwa ngolu hlobo lulandelayo:
imveliso igalelo ulayishiwe kwi Sorter ngokudlula kwi-feed hopper.With ngoncedo kokukona izinto aqukuqela ecaleni omfutshani nokwabiwa channels.Then imveliso ungena izowuni uhlolo, apho ikhangelwe yi boluvo aphezulu-Tech okanye CCD -cameras.Cameras, ebamkele ukukhanya eboniswe kulo mbandela ezikhethiweyo, ukujikelezisa uphawu yombane kwinkqubo yokusebenza ye khompyutha.
elektroniki ethembekileyo hardware
Hardware ulungiselelwe iibhodi ngokulula replaceable elektroniki,
usebenzisa iteknoloji FPGA ekugqibeleni;
imisebenzi ukuzeyisa, ezifana auto-zokuxilonga kunye auto-sandi kukho umgangatho na bahleli;
Ngasemva kwe-software lokusebenza USB ebhodini.
Isantya esiphakamileyo uphawu nokunatyiswa nonxibelelwano bagxothwe Isistim ikuvumela kwentsebenzo obalaseleyo.
-High speed FPGA processing Inkampani ALTERA ukususela USA
SAMSUNG sinochuku eMzantsi Korea
TOSHIBA camera Womenzi Japan
ISMC air filter ukusuka Japan
Schneider umoya nokucima iqhosha ethe France
Kuthetha Well unikezelo amandla Taiwan
MATRIX ejector evela eItali (woqondo)